Home | Xoreynta Khilaafka
Mashruuca Biyaha Weyn
Noqo Qofka aad runtii Rabto inaad Noqo!
Qalabkaaga oo dhammaystiran oo loogu talagalay isbeddelka is-toosinta miyir-qabka leh.
Ku dhex jar lakabyada jawaab-celinta xaalad-caafimaadeedka iyo dabeecadaha, oo noqo cidda aad runtii tahay.
Alchemical Trinity waa aalad kacaan cusub oo isbeddel ah oo kacaan ah oo loogu talagalay in laguugu oggolaado inaad noqoto qofkii had iyo jeer lagaa rabay inaad ahaato.
Saddex-geesku wuxuu ka kooban yahay saddex dawayn oo gariir ah oo naxdin leh:
Dawada buluuga ah ee loo yaqaan 'Lot Lotus'
Saddexda daaweyntu waxay si wada jir ah uga wada shaqeeyaan sidii loo caddeyn lahaa wixii innaga ina haysta. Mid kasta oo ka mid ah daawooyinkaan waxay leeyihiin door gaar ah oo ay ku ciyaaraan ka foojignaanta buuxda ee xaalad-bulsheedka, qaababka iyo xusuusta taasoo naga dhigeysa inaan ku xirnaano aaminsanaanta iyo dhaqamada aan noo adeegin.
KA HELI KOOXAHA KOOWAAD
Anigu waxaan ogolahay inaan xor u ahaado.
Tiknoolijiyada Aaladda Alchemical ee loogu talagalay Da'da Casriga ah
Xoreynta waxay dejisaa heerka istaandarada cusub ee hufnaanta aadanaha iyo qalabka kor u qaadaya miyirka. Iskudhicii hore ee qalabka alchymies ayaa dib loo soo sara kiciyey oo la kordhiyay iyadoo la isticmaalayo tiknoolajiyada casriga ah ee cusub, oo keenaya nolol cusub oo ah qalab firfircoon oo firfircoon oo firfircoon.
Xeelad ku socota hadalka oo ku saabsan awoodda ay u leeyihiin in ay taageeraan shakhsiyaadka ku dhiirrigelinta maskaxda, jidhka iyo nafta iyada oo loo marayo in la nadiifiyo saxarada karmicka ah iyo burburka dareenka joogtada ah. Ku noqoshada xoriyadahan tamarta ah waxay siinaysaa hal dhabarka dambe oo awood leh sidaa daraadeed waxaan dhamaanteen noqon karnaa cidda aan ula jeednay in laga bilaabo bilawga, xorreynta iyo bilaashka ah.
Waxyaabaha ay ka kooban Dabiiciga ah
Ka dib cuntooyinka qadiimka ah, si taxaddar leh oo si taxadar leh loo soo doortay maaddooyinka dabiiciga ah, dabiiciga iyo isku dhafka alchemical loogu talagalay da'da casriga ah.
Jabhada xoraynta waxay ku dhex jirtaa caadooyinka ruuxiga ah ee qadiimka ah. Tani waxay awood u leedahay inay nadiifiso awoodda maskaxeed iyo niyadeed.
Isku-darka biyaha ee dhulka adoo u ogolaanaya xor ka ah in la dhadhamiyo oo lagu qulqulo marinnada biyaha ee dunida oo dhan si ay isugu xiraan dhammaantood.
Maxay yihiin kuwo kale oo ay la kulmayaan xoriyad?
Maqla waxa ay dadka kale ka yiraahdaan waayo-aragnimadooda ay ka qabaan Liberation. Tayada isbeddel ku yimaada heerarka maskaxeed, maskaxda, dareenka iyo ruuxa!
Eeg Arimaha Dheeraad ah
Tiknoloji mustaqbalka hore
Waxyaabaha qarsoodiga ah ee hore u muujiyay.
Tiknoolajiyad maskaxeed iyo alchemicals ah oo abuuraya hab cusub oo lagu hagaajin karo loona dhisi karo qof naftiisa. Dagaalku wuxuu adeegsanayaa tiknoolajiyada cusub ee la yaqaan 'formula' kaas oo hadda la heli karo.
Sare u qaadista tamarta
diiradda, awoodda iyo isku dheelitirka
Marka diirada la saaro iyadoo la adeegsanayo qaabka hore ee laga saaray jidhka waxaan awoodnaa inaan keeno dhammaan tamarkeena si aan wax uga qabano waxqabad kasta. Waxa kale oo macnaheedu yahay inaanan waqti ku qaadanaynin mustaqbalkeyaga ama walwalka mustaqbalka. Tani waxay u tarjumaysaa daal badan oo jidhka ah, waxaan sidoo kale u baahanahay inaan seexanno wax yar maadaama aynu si dhaqso ah ugu soconno gudaha iyo dibedda nasashada.
Dheecaan da'da, u yeelo qolka cusub
Marka aynu nadiifinno qaabka caadiga ah ee caadiga ah waxaanu caadi ahaan ku lug yeelannaa qayb ka mid ah taariikhdeena oo aan xasuusto, mar dambe kuma soo kordhineyno muusikada dareenka ee nolosheena. Jirdilku sidan ayuu u sameeyaa si uu u keeno dusha sare si loo arko, dareemo kadibna la sii daayo hal mar iyo dhammaanba. Markaas dareenku caadi ahaan wuu ka soo bixi karaa iyadoo aan lahayn waajibaadkii caadiga ahaa ee la soo dhaafay si uu uga jawaabo hab gaar ah, dabadeedna waan la socon karnaa ama ma heyno iyadoo aan la qabsanaynin dabinadeeda.
Markaa waxaan leenahay ikhtiyaarka aan ku nadiifin karno qashinka biyaha oo aan ku dhicin.
Buuxi dabeecadda dabeecadda
Ku noqo gurigaaga waddankaaga dabiiciga ah
Isku-darka tamarta ku dhex jira ayaa si dhammaystiran u caddeynaya jihadaada, ujeedada iyo hadafka noloshan. Xoreynta waxay taageertaa mid ka mid ah furitaanka mid ka mid ah caddaynta gudaha, waxay fududeeyaa isku xirnaanta cirifka gudaha, waxay ku hageysaa hal mar daqiiqad kasta oo ku saabsan niyadda badan, fudud iyo farxadda.
Your Liberation, Awaits.
Nooca Buuxa ee Dabiiciga ah ee Dabiiciga ah
Nooc dhammaystiran oo ah maaddooyinka, si taxadar leh loo diyaariyay, la isku soo dubariday oo loo soo saaray si loo sameeyo, LIBERADA.
Qaab-dhismeedka qadiimiga ah ee ka sameysan 9 wuxuu ka kooban yahay mid kasta oo la gubay waqtiyo 100 si loo xakameeyo awooddooda dib-u-cusbooneysiinta iyo karmikada.
Macdan macaan oo biyo nadiifiya oo u dhaqdhaqaaqa sida gaartameelka elektromagnetic. Maadaama dhiig badani yahay biyaha taasi waxay leedahay saameyn qoto dheer oo awood leh oo ku leh dhiigga kaasoo maanka ku haya.
Qoyan ayaa soo ururiyey oo ka awood badiyay dabka 4 ee si joogto ah u gubanaya sanooyinkii ugu dambeeyay ee 50. Dabka shanaad waa qorraxda. Ashkani wuxuu matalaa diiradda qiyaas ahaan konton sano oo isbeddel ah iyo nadiifinta.
Durga diiniga ah ee Durga oo loo rogay isbedelka iyo isbeddelka, u oggolaanaya marxaladaha dhacdooyinka in ay si fiican u muuqdaan sida waxyaabo cad
Waxay abuurtaa ilmo sida ugu dhow ee looga tago raaxada fudud ee waxyaabo yaryar, dareenka ilmo daawashada kabadhada markii ugu horeysay.
Musqulo loo yaqaan "adaptogenic mushroom" kaas oo ka caawinaya dhammaan isku dhafka maaddooyinka, iyaga oo keenaya samaynta iyo isku dheelitirka
Xorraynta xoraynta iyada oo loo marayo shabakad degaanka iyo kuwa caalamiga ah. Xiriirinta tamarta, dariiqyada iyo dadka dunida oo dhan iyada oo loo marayo daaweyntan awoodda leh.
Mashruuca Waters Unified
Daawooyinka Xasaasiyadda Alkeemikada
Daahfurka Diamond - 10ml
Soo-iibsiga - 10ml
Midab buluug ah - 10ml
Xoreynta - 10ml
Xuquuqda daabacaadda 2018 Dhammaan Xuquuqda La Siiyey FreedomtheRemedy.com Bayaanka websaydhka ma aysan qiimeyn Maamulka Cuntada iyo Daawooyinka. Alaab kasta oo looga hadlay ama lagu xayeysiiyay looguma talo galey inay soo gartaan, daweeyaan ama ka hortagaan cudur kasta. Natiijooyinka marqaatiga ah maahan wax iska caadi ah. Macaamiisha waxaa laga yaabaa inay heleen shahaadada hadiyadda ka dib markay soo gudbiyeen maraggooda. Haddii aad uur leedahay, kalkaalisid, dawo qaadatid, ama aad qabtid xaalad caafimaad, kala tasho dhaqtarkaaga kahor intaadan isticmaalin wax cunto ah. Fers Bixinta la daabacay boggan, oo ay ku jiraan qorshooyinka AutoShip, waxay u shaqeynayaan macaamiisha tafaariiqda kaliya, maahan xirfadleyaasha ama jumlalayaasha. Soo-dejinta bilaashka ah waxay u ansaxantahay macaamiisha Mareykanka kaliya.